Jobho 18 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
18 Zvino Bhiridhadhi muShuhi akapindura, akati: 2 “Mucharamba muchitaura kusvikira rini?Munofanira kunzwisisa, kuti pashure tozotaura. 3 Neiko muchifanira kutiona semhuka+Uye motiona setisina kuchena? 4 Iwe ndiwe unobvambura-bvambura mweya wako wakatsamwa.Nyika ingasiyiwa nokuda kwako here,Kana kuti dombo ringabviswa panzvimbo yaro here? 5 Chiedza chevakaipa chichadzimwa+Uye pfarivari yomoto wake haizopenyi. 6 Chiedza chichasviba mutende rake,+Uye rambi rake richadzimwa mukati maro. 7 Nhanho dzake dzesimba dzichava pfupi.Kunyange zano rake richamuwisira pasi.+ 8 Nokuti tsoka dzake dzichamupinza mumumbure,Achafamba achipinda mumumbure.+ 9 Chiteyeso chichamubata nepachitsitsinho;+Musungo+ unoramba wakamubata. 10 Tambo yaakateyirwa yakavanzwa muvhu,Uye chokumubatisa nacho chakateyiwa pagwara rake. 11 Zvinongoerekana zvavhundutsa zviri kumativi ose zvichaita kuti atange kutya,+Zvomudzingirira zvakati namename naye. 12 Simba rake rinopera somunhu aziya nenzara,Njodzi+ ichagadzirira kuita kuti akamhine. 13 Dangwe rorufu richadya ganda rake;Richadya nhengo dzomuviri wake. 14 Chaanovimba nacho chichabviswa mutende rake+Uye chichamuendesa kuna mambo anotyisa. 15 Mutende rake muchagara chinhu chisiri chake;Sarufa+ ichaparadzirwa panzvimbo yake yaanogara. 16 Nechepasi midzi yake ichaoma,+Uye kumusoro, davi rake richaoma. 17 Kutaurwa nezvake kuchapera panyika,+Zita rake harizozivikanwi mumigwagwa. 18 Vachamusundira murima achibva muchiedza,Uye vachamudzinga panyika inobereka. 19 Haazovi nevana kana vazukuru pakati pevanhu vokwake,+Uye panzvimbo yake yaaigara ari mutorwa hapazovi neanopona. 20 Pazuva rake vanhu vari kuMavirira vacharamba vakatarira vachishamisika,Uye vanhu vari kuMabvazuva vachadederawo. 21 Idzi chete ndidzo tebhenekeri dzomunhu anoita zvakaipa,Uye iyi ndiyo nzvimbo yomunhu asingazivi Mwari.”